CHO CHO Company Limited
Salary : ( ) Login to view salary.
Region : Yangon
Posted date: 13-May-2020
Close date: 31-May-2020
Human Resource Manager Building (3), Room (6), Myanmar ICT Park (MICT Park), Hlaing Campus, Hlaing Township, Yangon Division. (Head Office), Hlaing, Yangon
Apply Now! Save Job!
Quick Apply Form:
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
ဘွဲ့ရရှိထားပြီးသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် (ယောက်ျားလေးများ အတွက်သာ) လက်ဝယ်တွင်ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းချုပ်၊ ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံနှင့်အတူကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ တစ်ပတ် အတွင်းအောက်ပါအတိုင်းလူကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလာရောက် လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ Email နှင့် လည်း လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
အမှတ် (၆၉)၊ တွင်းသင်းအတွင်းဝန်ဦးထွန်းညိုလမ်း၊ စက်မှုဇုန် (၂) ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
Email : hr@chochoco.biz
Phone: 01-507045, 507160, 09-795220736 (Mon to Sat : 08:00 am- 04:00pm)
သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း Driver Driver Security Driver Driver IT Technician Driver / Delivery
Others(29)Sales/Marketing(24)Driver/Security/Cleaning(22)Engineering/Technical(20)Accounting/Finance/Cashier(14)Management(10)HR/ Administrative(8)Manufacturing/Warehouse(7)Agriculture(3)Design/DTP(3)Customer Service(3)Hair/Nails and Beauty(2)IT Hardware/Software(1)Education/Teaching/Childcare(1)Logistics/Distribution(1)